Saxannada Flash waa drives ugu muhiim ah in aad ku hayn kartaa faylasha aad. Flash drives waa size la qaadi karo oo yar sidaas aad qaadi kartaa adiga iyo meel kasta oo aad u isticmaali kartaa. Flash drives leedahay awoodaha kala duwan oo laguu ogolaado in aad badbaadin files xogta aad. Si kastaba ha ahaatee wixii aad karo files xogta marka aad qaab this disk ama haddii uu ku kharribeen. Si loo badbaadiyo this files muhiim ah ka ah files kharribeen aad u baahan tahay si ay u joojiso isticmaalka drives flash tan aad overwrite laga yaabaa in ay ku. Intaas waxaa sii dheer raadiyo qalab kabashada xogta in soo noolayn doonaa xogta aad si ammaan ah.
Sababo keeni yaabo in uu ku kharribeen Flash Drive
Xaaladaha kharribeen flash drives yihiin baahsan la drives. Flash drives aad u burburay iyo halkan waa Sababaha ugu caamsan.
1. Virus iyo weerar kharimibo
Waxaa jira noocyo kala duwan oo virus in inta badan weeraraan naga kombiyuutarada drives flash iyo drive adag. Waxay inta badan u hesho qalabka our internetka ama faylasha u kharribmay. Markii ay galaan drives flash ay maayo dhaawac jirka aad xogta laakiin waxa ay dhaawici doontaa content ee flash drive.
2. Ka kaxaynta Nabadla '
Marka la isticmaalayo wadid aad u adag in la hubiyo in aad u soo tuurid si sax ah. Marka aad u korto on your computer oo aad wareejinta dhaqanka xogta si ay u soo tuurid si ammaan ah ka your computer. Mac guji amarka + E furayaasha. Marka aad tuurid flash halka wareejinta xogta aad ugu danbeyn dhaawici doontaa files ee halkan ka flash ee uu u kharribmay.
3. heerkulka ba'an.
Iska ilaali in aad ku tiriska flash drive in deegaanka sida kulaylka iyo qabowga. Ma aha heerkulka kaliya laakiin sidoo kale arrimo kale sida biyaha. Marka arrimahan deegaanka u hesho in si flash drive ay dhaawici gacanta halkan ka taasoo keentay in khasaaraha xogta.
4. isticmaalka culus
Waxaa jira hal wax oo aad marnaba loo yaqaan la flash drive. Marka aad u isticmaali muddo dheer waxaa lagu sakhiray in ay xirtaan iyo jeex. Tani isticmaalka muddo dheer ka dhigi doonaa file lumin heerka ku dajiso. Tani waxay ka dhigan tahay shaqadooda gudan doonaa oo aad waayi doonto xogta ku yaal. Isticmaalka inta badan flash this muddo dheer sidoo kale gacan ka this.
5. dhaawaca jirka
Sida aad xamili drives waayeen sababta musuqmaasuqa ee flash drives. Dadka qaarkood qaadaan drives flash ee jeebkooda. Waxa kale oo aad hoos u kartaa disk flash iyo jir ahaan nasashada. Haddii aysan jebin qaybta jirka ee ay dabciyo halkan ka waxyeelo u flash drive. Haddii aad tahay si ay u fuliyaan aad flash drive loo hubiyo waxa uu daboolka oo si fiican u hayn. Had iyo jeer taxaddar ku saabsan sida aad u qaadan mas'uul ka ah flash drives. Ula dhaqan sida shay jilicsan tan iyo waxa ku jira oo aad qiimaha leh. Waxaad noqon kartaa qof nasiib badan tahay oo aad u iftiimiyo drive waxaa burburay laakiin weli waxaa laga garan karaa in kombiyuutarka oo aad rabto inuu ka soo kabsado faylasha waxa ku jira. Tani waa in aad awoodi dhoola on wajigaaga tan iyo waxaad isticmaali kartaa software maskaxda waxay afuufayeen loo yaqaan Wondershare Data Recovery waxaad isticmaali kartaa software this eegin nidaamka qalliinka aad isticmaalayso. Windows iyo version Mac ayaa diyaar u ah in aad kala soo bixi. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado files kala duwan sida videos, Cajalado, sawiro, iyo sanamyadii ka flash drive, kombiyuutarada, iyo xataa kaararka xusuusta. Beauty of software taasi waa sida ay tahay iyadoo afar hababka soo kabashada in kabanayso oo dhan xogta lumay.
1. Khasaaray Data hab kabashada, hab Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado files lumay adigoo tirtirka ama faylasha u kharribmay.
2. ceeriin ah hab kabashada xogta, hab this nooleeyo xogta aad ku flash drive oo dhan iyada oo aan magacyo iyo waddada hore ay. Mar walba waa doorasho ee la soo dhaafay si ay u isticmaalaan marka hab xijaab iyo badiyay hab kabashada File aad disappoints.
3. hab-kabashada ah Barzakh, tan hab eegi doonaa oo dhan xogta waayay partitioning, resizing iyo files xitaa tirtiray.
4 furmaya Recovery, haddii ay dhacdo in aad u bilaabatay kabashada ah markaas aad aqbalsan yahay, waxaad isticmaali doontaa hab inaan sii wado la.
Iyada oo yidhi aynu arki sida loo isticmaalo software this. Download oo aan bilowno on your computer. Markaas buuraha aad u burburay flash drive in kombiyuutarka.
Tallaabada 1 Aqoonso doorasho soo kabashada Data
Marka aad furto software ah hab afarta kabashada muuqan doonaan barnaamijka. Ku bilow iibsan isticmaalaya Khasaaray hab kabashada File.
Ka hor inta aanad bilaabin baar waa in aad soo ogaato in aad baabuur waddo dooro noocyada file in la soo kabsaday. Wixii kiiskan Waxaan sharad waxaad u baahan doontaa files oo dhan in la soo kabsaday. Riix dhammaan faylasha icon. Si aad u hesho iskaanka ah oo qoto dheer ee files on guji sahlo Deep Scan doorasho. Halkaasna ka sii taga bidix ee kore iyo guji Scan.
Tallaabada 3 Save kabsaday files
Kadib markii geedi socodka iskaanka waa dhameystiran aad ku eegaan karo wixii la soo kabsaday. Tani waa mid ku habboon files iyo sawiro. Tayada files soo kabsaday ayaa sidoo kale soo bandhigay. Dooranaysaa dhammaan faylasha in aad rabto iyo guji soo kabsado. Dooro kaydinta dibadda si loo badbaadiyo faylasha aad.
Sida loo hagaajin indhotiri Flash Drive
Xaaladaha qaarkood flash drive dhici karta in uu ka soo muuqan on your computer. Waxaad u baahan doontaa in ay marka hore hagaajin. On Mac tagaan si ay Finder> Codsiyada> Utilities. From waxaa guji on Disk Utilities. Tag First Aid iyo Repair disk.
Haddii aad isticmaalayso daaqadaha isticmaali maamulka digsi in ay qaab disk ah. Tag bilow> computer iyo rigt click ku yaal. Waxaad arki doontaa maamulka digsi ka yar Kaydinta.
Aqoonso aad flash drive iyo qoondeeyo waddooyinkiisa adigoo gujinaya Change Drive Letter iyo waddooyinka. Tag ka hor iyo ogolaadaan isbedelka ku dhacay oo u yeelaan warqad aad flash drive. Warqado waa in uu ahaadaa dhexeeya E iyo Z. ugu dambeyntii guji Ok inuu isbedel taas oo ka dhigi doonaa readble daaqadaha aad sameeyaan.
Ka dib markii ay sidaas samaynaya markaas isticmaali Recovery xogta Wondershare tallaabooyinka wada hadlay ka hor inta inuu ka soo kabsado files waxa on.
Waad aragtay sida dhibsado waxay noqon kartaa markii aad flash drive ku guuldareysto you.it Sidaa darteed waa muhiim in aad file ka helo musuqmaasuqa halkan yihiin talaabooyinkan aasaasiga ah loo ilaaliyo.
1. Iska ilaali in aad ku tiriska flash drive kulka ama biyo qabow.
2. Mar walba si loo hubiyo in aad flash drive si fiican u xiran yahay oo looga hortago dhaawac jireed.
3. Mar walba tuurid aad flash si ammaan ah xujeesan, marka aad korto on your computer.
4. Ha isticmaalin hal flash drive muddo dheer. Isku day oo cusboonaysiiyo.
5. Ku rakib barnaamijka virus anti ku saabsan qalabka aad.
> Resource > Flash Drive > Sidee loo badbaadiyo Vital Files From a kharribeen Flash Drive